Indlela Engcono Kakhulu Yokugwema Izingxabano Zesivumelwano se-UAE: Izinyathelo ezi-4 Ongazithatha Namuhla. 0000
Indlela Engcono Kakhulu Yokugwema Izingxabano Zesivumelwano se-UAE: Izinyathelo ezi-4 Ongazithatha Namuhla.
Shiya amazwana	/ Blog, amacala enkantolo, Ukuvikelwa Kwesigebengu, amafemu omthetho e-dubai, Abameli bokuzibophezela / By Sarah
Yini indlela engcono yokugwema izingxabano zesivumelwano se-UAE? Lezi yizinyathelo ezi-4 ongazithatha namuhla.
Lapho uthuthela e-UAE, iningi labantu lizofuna izingxabano zabo zenkontileka nommeli wendawo. Kepha ngaphambi kokwenza izinqumo mayelana nokumelwa ngokomthetho, kubalulekile ukuqonda ukuthi iyini “ingxabano yenkontileka” nokuthi ingavela kanjani. Sithathe isikhathi ukuhlanganisa izindlela ezi-4 ezinhle kakhulu zokugwema izingxabano zezinkontileka ezizokusiza ukuxazulula izinkinga emgqeni ukuze ukwazi ukugxila ekuzingeni ezweni lakho elisha.
Izingxabano zezinkontileka zidlangile ezweni lamabhizinisi lanamhlanje ngenxa yabantu abafika esivumelwaneni bese bephula.
Lokhu kungenxa yezimo ezifana; ukuhlela okungafanele ekuqaleni kwesivumelwano kanye nemibandela yenkontileka engacaciseli amaqembu ezindaweni ezinemvume enkulu. Le migomo ingafaka imininingwane yokunikezwa kwenkontileka yiqembu elilodwa. Ukushintshaniswa kokucatshangelwa kungenzeka kunganwetshwa ngokunengqondo kuzo zombili izinhlangothi okuholele ekuqhekekeni okukhulu ngoba ukucatshangelwa kuyinto ebalulekile njengoba kusho okuthile okuyigugu.
Inkontileka nayo ingaba njalo ngokungemthetho, kanjalo okwenza amaqembu ahluleke ngokwemigomo nemibandela yawo ngenxa yengozi yebhizinisi.
Inkontileka ingase ihluke amaphutha nokukhipha, okubangela iqembu elilodwa elizophikisana nesivumelwano ngenxa a ukungaqondi kahle komqondo. Ezinye izilinganiso zezindleko ezichazwe kabi nezingaphelele ziholela kusabelomali esihamba ngaphezu kwenani elilindelekile. Amaklayenti aqala ukulahlekelwa ukwethemba kwawo ibhizinisi njengoba ecabanga ukuthi imali yawo isetshenziswe kabi, okuyinto ephula imigomo yenkontileka.
Ukuze ube kwisivumelwano, kufanele ucabangele imigomo futhi uqaphele izinto ezizokusiza ukuthi ugweme izingxabano zenkontileka ezinemiphumela emibi kakhulu ezinhlangothini zombili.
Ukugwema izingxabano zenkontileka, kunezinto eziningana umuntu okufanele azicabangele, futhi lezi yilezi:
Kufanele uthintane nommeli.
Ngaphambi kokungena kunoma iyiphi inkontileka, kufanele uxhumane nommeli wakho webhizinisi ukuze ucatshangelwe ngokomthetho. Ummeli kufanele ahlole ukuba semthethweni kwenkontileka, imigomo eqondile, kanye nentshisekelo kulolu daba. Kufanele futhi qagela umphumela wesivumelwano uma olunye uhlangothi luhluleka nokuthi lungabhekana kanjani nezindaba ezingabangela ukungafani nezidingo kuthathwe icala inkantolo.
2. Bhala inkontileka
Kubalulekile uku udweba inkontileka ngosizo lwe-a ummeli. Abanye benza izivumelwano zenkontileka ezingabhalwanga ngoba banobudlelwano obusondelene kakhulu noma ubudlelwane nomuntu onesivumelwano naye. Lokhu kudala izingxabano eziningi njengoba bungekho ubufakazi uma ingxabano enjalo iyiswa kunoma iyiphi inqubo yezomthetho. Ngokubhala uhlaka, luzokhombisa intshisekelo nokushintshwa kwanoma yisiphi isivumelwano.
3. Cacisa ukuhumusha okungenzeka kube khona
Ngaphambi kokusayina noma iyiphi inkontileka, kufanele ufunde futhi uyiqonde ukuze ugweme ukuyihumusha kabi. Lokhu kuzoqinisekisa ukuthi uyiqonde kahle imigomo futhi wahlola uma ngabe indawo yakho oyithandayo ithathelwe ingqalelo. Inika amandla zombili izinhlangothi ukuthi zikulungele ngokuphelele ukusebenza ngaphakathi kwemikhawulo yesivumelwano. Kufanele uhlole ukuthi ngabe bonke abasebenzi abadingekayo banakho yini ivumile futhi isayinwe ingxenye yabo njengoba kudingwa yisivumelwano. Isivumelwano kufanele sibe ngolimi olucacile, olufundekayo futhi hhayi oluyindida njengoba sisetshenziswa njengomhlahlandlela kuso sonke isikhathi sesivumelwano.
Kufanele futhi ibhekele indawo yesinxephezelo nezindleko uma kukhona izindleko ezingalindelekile noma inkinga esikhathini sesivumelwano. Ukuhunyushwa okungalungile kuphuma ngokusobala lapho amaqembu womabili enomqondo ohlukile ngenkontileka
4. Wazi amalungelo nezibopho zakho
Kubalulekile ukwazi okulindelwe okwabiwe ngabo bobabili abathintekayo kanye nomsebenzi wabo esivumelwaneni. Kudingekile ukugwema ukuphulwa kwemigomo yesivumelwano ngeke kubonise lokho okuvunyelwene ngakho. Isu kufanele sakhiwe ngomsebenzi womuntu wokuxazulula ukungavumelani uma kuphakama. Igcina isikhathi nemali, nobudlelwano bamaqembu womabili ayihlukaniswa phakathi empikiswaneni.
Isivumelwano kufanele sichaze ngokusobala ukuthi izibopho kufanele zibe yimali yini kuzinsizakalo ezinikezwayo futhi nemininingwane yezinsizakalo kufanele inikezwe. Kufanele futhi ucabangele ukuthi ngabe inkontileka ivikela ukukhathazeka ngakunye ngokwesibopho sakho.
Kumele wabeka imithetho nemigomo ethile, engacatshangelwa ukuze kuqedwe inkontileka yokuqala. Lesi senzo singenxa yezizathu nezimo ezahlukahlukene eziphakamisa izingxabano. Ukugcina amarekhodi esivumelwano sakho njengamakholi wefoni, ama-imeyili, amashidi okukhokha nama-invoice kubalulekile ukuqinisekisa ukuthi inqubo yesivumelwano iyimpumelelo. Kufanele futhi uqinisekise ukuthi zingatholakala kalula. Ukwenza isabelomali sephrojekthi ngaphambi kokuba uqale ukusebenza kuyasiza ukulinganisa ukuhlela okudingekayo nokuzilungiselela izimo eziphuthumayo ezingenakugwemeka.
Lokhu kusiza ukugwema izingxabano zezindleko nezokukhokha okube yinselelo enkulu ezivumelwaneni eziningi njengoba imali imvamisa iyimpande yezimpikiswano eziningi zebhizinisi ku Dubai noma I-United Arab Emirates.
Ukucabangela yisikhathi esiyinhloko sezinzuzo ezithenjisiwe ezitholwe izinhlangothi zombili esivumelwaneni. Umuntu kufanele abe nokucatshangelwa kwamanje kwezinsizakalo; lezi izinzuzo zamanje eziza nesithembiso. Isibonelo ukukhokhela insizakalo ebithunyelwe ngokwesivumelwano. Ukucatshangelwa kuyisivumelwano senxephezelo esenziwa ngemuva kokuzuza kusevisi. Ubeka futhi nokucatshangelwa kwesikhathi esizayo okuyinzuzo ezinhlangothini zombili.
Ukuze ube kwisivumelwano, kufanele ucabangele imigomo futhi uqaphele izinto ezizokusiza ukwazi gwema izingxabano zenkontileka ezinemiphumela emibi kakhulu ezinhlangothini zombili, kufaka phakathi ukulahleka kwemali ebhizinisini kanye nenqubo yezomthetho nokuntuleka kokwethembana phakathi kwamaqembu. Kungasiza uma uthathe isikhathi ukwakha imishwana ukuze uqiniseke ukuthi lesi sici sizohlala sisebenza ngokuzayo. Ngalokhu, uzokwazi ukugwema inkontileka yokuhweba icala kwanoma yiluphi uhlobo.
Ngemuva kokuthatha lezi zinyathelo, amaqembu azobhekana nenqubo yokuxazulula izingxabano lapho kuthathwa khona inkundla, indawo, umthetho osebenzayo, kanye nomthetho wenqubo.
Ekuphetheni, ukuxazululwa kwezingxabano kuyaphoqeleka, kuyabopha, futhi kuyasebenza uma kunika amandla amaqembu ukuthi aqhubeke nobudlelwano bokusebenzisana.